အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရား သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်။ | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရား သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်။
မှတ်သားစရာများ . ပြည်တွင်းသတင်း . ရှမ်းရိုးရာများ . ရှမ်းသတင်း
ရှမ်းပြည်နယ်-ညောင်ရွှေမြို့မယ်-အင်းလေးဒေသ၊နန်းဟူးရွာ တွင် သီတင်းသုံးတော်မူသော
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၇၃-ခုနှစ်တွင်၊ပုဂံနေပြည်တော်ကြီး တွင်၊ထီးနန်းစိုးစံတော်မူသော နရပတိ အလောင်း စည်သူ မင်းကြီးသည် ၊ မဟာသမုဒြာတွင်ရှိသော ရတနာ အမျိုးမျိုးတို့ကို ကြည့်ရှူတော်
မူလို သဖြင့်၊ သင်္ကနက် ဖောင်ယာဉ် စကြာဖြင့်၊မှူးမတ်ဗိုလ်ပါတို့ ခြံရံလျက်ထွက်ခွာတော်မူသည်။
မင်းကြီးသည် ဖောင်ယာဉ်စကြာနှင့် ယမထာကြီမ်လုံးစကြာကိုပိုင်ဆိုင်သောမင်းမြတ်ဖြစ်ပေသည်၊
ထိုကြောင့် သင်္က နက်ဖောင်စကြာကို သွားလိုရာအရပ်တွင် (လက်ညိုးညွန်ရာ ရေပြင်ဖြစ်ရလေသည်။)
ဟူသော ဆိုရိုးစကားထင်ရှားလေသည်။ အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးသည်တိုင်းခန်း လှည့်လည်တော် မူရင်း ၊မြင့်မိုရ်တောင်သို့ သွားလိုသော စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြလာ သဖြင့်၊မြင့်မိုရ်တောင်သို့ သွားရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်သည်။
တာဝတိန်သာ နတ်ပြည်ကို အစိုးရသော သိကြားမင်းနှင့် မိဖုရားသူသီတာတို့က၊ လူအိုခင်ပွန်းအရောင်ဖန်
မေးမြန်းခဲ့သည်မှာ- အကျွှန်ုပ်တို့ခင်ပွန်းသည် တဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ကပင် အီမ်ထောင်ပြုပြီး မြင့်မိုရ်တောင် သို့ ရောက်ခြင်သောအားငါတို့သွားသည်၊ ယခုမူကား မြင့်မိုရ်ငွေ့များ မတွေ့ရပါ။တို့သာမိုက်လှဖြစ်ပေစွ၊ မတွေ့ပါရ၊ မြေးမောင်လှတို့ မှတ်ရသူအိုစကားတည်း။ ဟုပြောပြီး အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးသည် သူအိုတို့ ပြောသည့်စကားကိုမယုံကြည်ဘဲဆက်လက်သွားရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေပါသည်၊ ထိုကြောင့် ဖောင်ယာဉ် စကြာနှင့်သူအိုတို့စီးနှင်းသော လောင်းလှေငယ်တို့ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ၊သိကြားမင်းဖန်ဆင်းထားသော လောင်းလှေငယ် ကပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့် ၊မင်းကြီးက သွားရန်အစီစဉ်ကိုဖျက်သီမ်းလိုက်လေသည်။
အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးသည် ဇမူသပြေပင်ရင်းသို့ဆိုက်ရောက် သောအခါ ဗိုလ်ရှုသဘင် ခံယူတော် မူလေ၏၊ ထိုအခါ ဟိမ၀န္တာ တောအရပါမှလာသော လီလူးတယောက်သည် သားငယ်ကိုပိုက်ပြီး
ရေစောင့်နတ်က သယ်ယူပေးပြီး ၊ဘီလူးမက အလွန်ဝမ်းသာလှပေ၏ ထိုအခါ ဘီလူးမက မိမိနေရာ ဟိမ၀န္တာတောအရပ်သို့ ၀င်ရောက်ပြီး အနံ့မွေးကြိုင်လှသော သရက္ခာန်အစစ်ကို ဖြတ်ယူပြီး လာရောက် ဆက်သလေသည်။
-မြတ်သောမင်းကြီး မြင့်မိုရ်တောင်သို့မသွားခြင်းကား ကောင်းလှပါပေ၏ ငါကား သိကြားတည်း မင်းကြီး အား သာသနာတော်၏အကျိုးကိုဆောင်ရွက်စေချင်သောကြောင့် ၊မြင့်မိုရ်တောင်သို့ မ သွားဖြစ်လေအောင် တားမြစ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သာသနာတော်တည်သမျှ လူသတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့ ကိုးကွယ်စိမ့် သောဌာ- သင်မင်းကြီးအား၊ဘုရားရုပ်ထုတော်မြတ်ကို၊ငါပေးမည်ဟုဆိုကာ- မင်းကြီးထံတွင်၊ သရက္ခာန်အသားကိုတောင်းယူပြီး ရုပ်ထုတော်မြတ်(၅)ဆူကိုထုလုပ်ပြီးသီသဓါတ်တော်တဆူ၊ သရိယဓါတ်တော်မြတ်တဆူကိုထည့်သွင်းဌာပနာလေ၏ သရက္ခန်အစ-သပြေအစ-ဗောဓိအစတို့ကို စုပေါင်းပြီးစီရင်သောကြောင့်မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူဘု၇ား ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့လေသည်။။
ထိုဘုရားတွင် သီသမွေတော်(၁)ဆူနှင့် နှလုံးတော်တဆူသွင်း ပြီး ဌာပနာလေ၏
အထက်ဖော်ပြပါ သရက္ခာန်ရုပ်ထုတော်မြတ်(၅)ဆူနှင့်မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူ(၁)ဆူ၊ရှင်ဖြူ-ရှင်လှ(၂) ဆူပေါင်း ဘုရားရုပ်ထုတော်မြတ်(၈)ဆူ ကိုသိကြားမင်းကထုလုပ်ပြီးဆက်သလေ၏
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၄၈၂-ခုနှစ် တွင်၊အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည်တိုင်းခန်းလှည့်လည်မူရာ၊အရှေ့တောင်
ညို တောင်တန်းကြီးတွင် သာသနာတော်မြတ် ငါးထောင်အတွင်း သာသနာတော် ထွန်းကားသော အရပ်ဒေသဖြစ်လီမ့်မည်။ ထိုတောင်တန်း၏အရှေ့ကား (နောင်)မဟာနာဂရပြည်ကြီးဖြစ်ဖွယ်ရာရှိပေ၏ ထိုကြောင့်-သရက္ခာန်ရုပ်ထုတော်မြတ်(၅)ဆူကို၊ထိုအရပ်သေဒ၌တည်ဆောက် ဌာပနာပေးရန်သော တာပန်နတ်ကြီးက ဆိုတော်မူလေ၏၊မင်းကြီးကလည်းနတ်ကြီးဆိုသည့်အတိုင်း၊ ရုပ်ထုတော်မြတ်ကို ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယ၊စတုထ္ထ၊လေးဆူသော ဘုရားရဟန္တာရုပ်ထုတော်မြတ်ကိုပင့်ယူပြီး ဆင်တော်ပေါ်၌ တင်ကြလေ၏။အဖျားပိုင်း ပဉ္ဖမ ရုပ်ထုတော်ကို၊ ဆင်အတင်မခံသဖြင့် ထိုအရပ်၌ ပို့ဆောင်ခြင်းမရှိ၊ သရက္ခာန်ရုပ်ထုတော်မြတ်(၄)ဆူနှင့်မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူတဆူကို ဆင်ပေါ်တင်ပြီး လွတ်တော် မူလေသည်။ ရုပ်ထုတော်တင်ဆောင်လာသောဆင်များကို၊အရှေ့တောင်ညိုအရပ်၌လှည့်ပတ်လာရင်း သန်းထောင် အရပ်၊ဖောင်တော်ပေါက်တောင်ခြေရင်းသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါဆင်များမည်သည့်အရပ်သို့ မထွက် ထွာတော့သဖြင့်၊ထိုအရပ်တွင်ပင်ဌာပနာတိုက်တည်ဆောက်ပြီး၊လိုဏ်ဂူသွင်းထားပါသည်။ မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူဘုရားကိုတင်ဆောင် သော
ဆင်မှာတောင် အရပ်သို့ ထွက်ခွာလာရင်းမင်းကြီးကနန်းတော်သို့ ပြန်လည်ပင့်ဆောင်မည်ဟုဆိုလေသည်။ ထိုအခါ သောဆင်မှာ တောင်အရပ်ဌာနသို့ထွက်ခွာလာရင်းမင်းကြီးကနန်းတော်သို့ပြန်လည်ပင့်ဆောင်မည်ဟု
ဆိုလေသည်။ ထိုအခါသောတာပန်နတ်မင်းကြီးဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ- မင်းမြတ်ထိုရတနာမဉ္ဖူ
ဘုရားကိုမဟာဂါမရွာ၌သာ အပ်နှံထားရှိရန်၊ မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူဘု၇ားကို ထိုမဟာကာမရွာတွင် ၊အပ်နှံ
ထားတော်မူမှနောင်သောအခါ သရက္ခာန်ရုပ်ထုတော်မြတ်နှင့် တပေါင်းတည်း ရှိလာမည် ဟု သောတာပန် နတ်ကြီးကဆိုတော်မူလေသည်။
နတ်ကြီးဆိုတော်မူသည့်အတိုင်း မဟာကာမရွာကျောင်း၌၊ဆရာတော်(အရိယဓမ္မရာသီ) ထံအပ်နှံပေးပြီးမဟာကာမရွာသူ-ရွာသားများနှင့်အတူ ပွဲလမ်းသဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပပြီး၊ရေစက်ချအမျှ-အတမ်းပေးဝေကြပါသည်။
သက္ကရာဇ်၇၂၁-ခုနှစ်တွင်၊ညောင်ရွှေမြို့ စော်ဘွားကြီး စီဆိုင်ဖ လက်ထက်တော်အခါ သန်းထောင်အရပ်
နယ်ရှင်စော်ဘွားက မှူးတော်-မတ်တော်များနှင့်ခြံရံပြီးထွက်တော်မူကာ၊မြက်ခြုံပိတ်ပေါင်းတို့ကို ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်စေပြီး၊ရှာဖွေကြရာ လှိုဏ်ဂူအတွင်း၌ ဘုရားရုပ်ထုတော်မြတ် (၄)ဆူကိုတွေ့ရှိ ဖူးမြင်တော်မူခဲ့လေသည်။
ရောက်သောအခါ၊ ထိုမြို့တော်ကိုထိပါးတိုက်ခိုက် နှောက်ယှက်ဖန်များသောကြောင့် ၊ဗုဒ္ဒဘာသာ ရှမ်းမြန်မာတို့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောယင်း၏ရုပ်ထုတော်မြတ်ကို၊စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ရန်အန္တရယ်ကင်းရှင်းရာဖြစ်သော
ညောင်ရွှေမြို့နယ်-ရွှေအင်းတိန်ဘုရားကြီး၏ အရံစောင့်အသီတော်များနေရာရပ်ကွက်၌၊ ကျောင်းတော်
ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ပြီးလျှင် ပင့်ယူပို့ဆောင်စေပြီး၊အနော်ရထာမင်း အပ်နှံထားသည့်အတိုင်း၊၁၂-မှုမင်းရေး
ကိစ္စခပ်သိမ်းလွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးစောင့်ရှောက်ထိမ်းသီမ်းရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ဘွယ် အ၀၀တို့ကို
အမိန့်အာဏာများနှင့်အပ်ပြီးလျှင် အထူးစောင့်ရှောက် စေတော်မူလေသည်။
ညောင်ရွှေမြို့တော်၌ နှစ်စဉ် သီတင်း သီတင်းကျွှတ်လဆန်း(၇)ရက်နေ့တွင်၊ကျင်းပသောရုပ်ထုတော်မြတ်
။ ရ ။ ညောင်ရွှေမြို့တော်သို့ကြွ တညစံ။
။ ၈ ။ နန်းသဲသို့ကြွနေ့ဆွမ်းကပ်ပြီးလျှင်
။ ၈ ။ နန်းပန်ရွာသို့ကြွရောက်တညစံ။
။ ၉ ။ နောင်တောရွာသို့ကြွရောက်တညစံ။
။ ၁၀ ။ ရွာကြီးဘန်း ပုံသို့ကြွ တညစံ။
။ ၁၁ ။ ဆော်မရွာကျောင်းတော်သို့
အရောက်ကြွတော်မူကာ မြို့ရွာနေလူပြည်သူတို့၏ ရိုသေ၀ပ်လျှိုးရှိခိုးကော်ရော်အပူဇော်ခံ ၆-ဌာန ပွဲသဘင်
ရုပ်ထုတော်မြတ် (၄)ဆူသာ ဒေသစာရီကြွချီတော်မူခြင်း။
နှင့် သက္ကရာဇ်-၄၈၂ ခုနှစ်အတွင်း၊အင်းတီမ်ဘုရားအသီတော်ဖြစ်သောမဟာဂါမရွာကျောင်းတော်၌၊
နရပတိစည်သူမင်း အပ်နှင်းပေးထားသော မြတ်ပေါင်းမဉ္ဖူဘုရား ရုပ်ထုတော်မြတ်(၁)ဆူ ပေါင်း (၅)ဆူ
ဖြစ်လေသည်။ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူသည့်အပူဇော်ခံပွဲ၌၊(၅)ဆူလုံးပင့်ဆောင်ခဲ့ရာ၊ ညောင်ရွှေမြို့တော်သို့
ဘုရားလှေတော်နှစ်မြုပ်ပြီး၊ ရုပ်ထုတော်မြတ်(၅)ဆူအနက်(၄)ဆူသာရှာဖွေတွေ့ရှိ ပင်ယူရရှိသည်။ အဆိုပါ
မူလ ၆-ဌာနကြွချီတော်မူပြီး ၈-ဌာန ပွဲတော်များကျင်းပလာခဲ့သည့်ပြင်နောက်နောင် အုပ်ချူပ်တော်မူကြ
သောညောင်ရွှေမြို့စော်ဘွားကြီးများ လက်ထက်တော်တွင်၊ အရပ်ရပ်-အရွာရွာတို့မှစေတနာ သဒ္ဒါတရား တိုးပွား ထက်သန်လာကြသဖြင့်၊မိမိတို့ရပ်ရွာ တွင်နေ့ဆွမ်းကပ်လှူရာနှင့် ညကျိန်းတော်မူရန်
ခွင့်ပန်တင်လျှောက်ကြသည့်အတိုင်း ၊နောက်ထပ် ၁၂-ဌာနအရပ်များသို့ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့လေသည်။
အစိုးရဌာနအကြီးအကဲများနှင့်နန်းဟူးရွာ ဘုရားထိန်းသီမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဂေါပကအဖွဲံ့ လူကြီးများတို့ အားလုံးသဘောတူညီချက်ဆုံးဖြတ်ကြသည့်အတိုင်း၊ထိုနှစ်တွင်ဒေသစာရီကြွချီတော်မူခြင်းမရှိပါ။သက်ဆိုင်ရာ
အရောက်၊ဆွမ်း၊ပန်း၊ရေချမ်း၊ဆီမီး၊ဖရောင်းတိုင်များကိုလာရောက်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျောင်းတော်၌ နေ့စဉ်နှင့်အမျှလူစည်ကားနှစ်ဟု မှတ်ချက်ချပေမည်။
ထောင့်သို့အရောက်၊မိုးကြီး လေကြီးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတိုက်ခက်သဖြင့်၊ကရ၀ိတ်ဖောင်တော်လှေကြိး
မှာတီမ်းမှောက်သွားပါသည်။ထိုရုပ်ထုတော်မြတ်(၄)ဆူအနက်ရေအောက်သို့ ၂ဆူကျသွားပြီး ကျန်၂ဆူ
မှာဘုရားလူကြီးများတို့ကပင့်ယူရရှိလိုက်သည်ယရေအောက်၌ကျသောဘုရား၂ဆူမှာ ထိုနံနက်၉နာရီခွဲ အချိန်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်ပင့်ဆောင်ကြပါသည်.။
၁၃၂၈-ခုနှစ်တွင်၊ဒေသစာရီကြွချီတော်မူသည့်ခရီးစဉ်ကိုပြုပြင်ပြီး၊ကေလာဌာန ၌ ၊ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူရန်
ဌာနသစ်တိုးချဲ့ပြီးနှစ်စဉ် နေ့ဆွမ်းကပ်လှူဒါန့်နေသည့် ဇရပ်ကြီးဌာနကို ညကျိန်းဝပ်ရန်အချိန် ဇယားပြုပြင်လိုက်ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်တော်သလင်းလကွယ် နေ့ ကျောင်းတော်မှထွက်ခွာပြီး သီတင်းကျွှတ်လပြည့်ကျော်၂ရက်နေ့တွင်၊ကျောင်းတော်သို့ပြန်လည်ကြွဝင်တော်မူသည်။
၁၃၂၈-ခုနှစ်၊တောင်သလင်းလကွယ်နေ့နံနက် ၇ နာရီ အချိန်၊ကျောင်းတော် ပြာသဒ်ဦးပလ္လင်တော်မှ
စီးတော်လှေစံကျောင်းပြသာဒ်အတွင်းသို့ပင့်တင်ပြီး ကြွချီတော်မူရာ မိုးလေက်သးစင်နေသည်ကြားမှ
ညအချိန်ကဲ့သို့ မှောင်ကျသွားပါသည်. ထို့ ၈ နာရီခွဲအချိန် ကျရောက်မှ အလင်းရောက်ပြန်လည်မြင်တွေ့
လာပြီး နေစကြာ၏အလင်းရောင်ကို တွေ့မြင်ရလေသည်။ ထိုနိမိတ် ထူးခြားချက်ကို လူတိုင်းပင် အံ့သြရလေသည်။ ထိုနှစ်တွင်အင်းလေးဒေသ၌ ဘေးအန္တရယ် အများအပြားတွေ့ရှိရပြီး၊ ၁၃၂၉-ခုနှစ် ဒေသစာရီကြွချီတော်မူရာနေရာဌာနတိုးမြင့်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ ဘဲ နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကိုသာပြုပြင်ပေးခဲ့လေသည်။သီတင်းကျွှတ်လဆန်း၁-ရက်နေ့ကျောင်းတော်မှအင်းတီမ်ဌာနသို့ ကြွရောက်တော်မူပြီး သီတင်းကျွှတ်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်နေ့ရေသာဌာန မှကျောင်းတော် သို့ ပြန်လည် ကြွဝင်တော် မူလေသည်။
သက္ကရာဇ်၁၁၃၃ ခုနှစ်တွင်၊ရွှေအင်းတီင်္မ် ဘုရားကြီး၏ အရှေ့ဘက် မဟာဂါမရွာရှိ ဖောင်တော်ဦးကျောင်း
တော်ကြီးကို မီးသင့်လောင်သဖြင့်၊ ရွာကြီးဘန်းပုံအရပ်တွင်ကျောင်းတော်ဆောက်လုပ်ပြီး၊
နောက်တဖန်၁၂၄၃-ခုနှစ်ရွာကြီးဘန်းပုံ ကျောင်းတော်လည်း ထပ်မံ မီးလောင်ပြန်ရာ၊ သာလေးကျေးရွာ အုပ်စု×နန်းဟူရွာ၌ ကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီး၊ထာဝရကျောင်းတော်ကြီးကို ၁၂၅၂-ခုနှစ်တွက် တည်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်လာကြသည်။ထိုနောက်ကျောင်းတော်ကြီးမှာပျက်စီးယိုယွင်းမှုများပြားလာသဖြင့်၊သက္ကရာဇ် ၁၃၁၃×ခုနှစ်တွင်၊အထက်ပါ ကျောင်းတော်ကြီးကို ဖျက်သီမ်းလိုက်ပါသည်။
ယခုတည်ရှိသောကျောင်းတော်ကြီးကို၊၁၃၁၄-ခုနှစ်တွင်၊စတင် အုတ်မြစ်ချ ကွန်ကရက်တိုင်များကို တည်
ဆောက်ကြပြီး၊၁၃၁၇ခုနှစ်၊ဘုရားကျောင်းတော်တက်ပွဲကိုကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၁၈-ခုနှစ်တွင် ၊ကျောင်းတော်ကြီး၏စေတီလုံးထိပ်ထီးတော် မြတ်ကို အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ပြီးစီးကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။